Bilaogy Iraniana & 2005 · Global Voices teny Malagasy
Bilaogy Iraniana & 2005
Voadika ny 02 Novambra 2017 2:55 GMT
Manohy ny fisiany mavitrika tamin'ny taona 2005 ny bilaogy Iraniana ary lasa fiteny faharoa be mpampiasa indrindra ny fiteny Persiana (aorian'ny fifandraisan'ny teny Persiana Anglisy amin'ny teny Frantsay) ao amin'ny tontolom-bolongana. Ireto ireo hetsika sasantsasany tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Iraniana tamin'ny taona 2005 izay manan-danja aminay:
1- Bilaogera any am-ponja: Saminnejad, bilaogera monina any Iran voampanga ho nanohintohina ny fiarovam-pirenena sy nanevateva Mpitarika. (Vakio ny GV), indrisy, mbola any am-ponja any Iran izy. Aza adinoina izy!
2- Fanivanana & Fijirihana: nanjary niharan'ny sivana ofisialy sady heverina ho tratran'ny fijirihana tsy ofisialy ny Bilaogy sy tranonkala Iraniana. Nanoratra Andriamatoa Moin, kandida reformista nirotsaka ho fidiana filoham-pirenena fa indroa voajirika ny bilaoginy. Araka ny filazany, tsy menatra ry zareo (governemanta) manivana izany mivantana “.
3- Maro ireo mpanao politika lasa bilaogera: Tajzadeh, mpikatroka reformista, Moin, Minisitra sady kandidà reformista nirotsaka ho fidiana filoham-pirenena, ary mpanao politika reformista maro hafa no nanomboka nanoratra ny heviny sy ny fivorian'izy ireo tao amin'ny bilaoginy tsirairay avy. Vao haingana ny naman'i Khatami no nanangana bilaogy ho azy ary nandrisika azy hanomboka hibilaogy.
Nahazo fanehoan-kevitra mihoatra ny 1500 ny hafatra voalohany nataony. Fanamarihana iray hafa fa mbola miraharaha bilaogy sy Khatami ihany ny Iraniana!
4- Hetsika Bilaogy Iray: Nisy ireo bilaogy sasany noforonina hitatitra lohahevitra iray na hetsika iray monja. Iray amin'ireo ny Free Ganji izay mitatitra ny vaovao rehetra, sy tatitra momba ny mpanoratra sy mpanao gazety nogadraina (Vakio GV). Bilaogy vaovao amin'ity sokajy ity ny Throat full of blades izay miresaka fianjeranà Fiaramanidina (Vakio GV).
5- Zannevesht, mpanao gazety Iraniana no nahazo ny loka Deutsche Welle amin'ny bilaogy tsara indrindra amin'ny fiteny persianina: Sambany nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity ny bilaogy Persiana.
6- Mihoatra Ivelan'ny Politika: Nanomboka namoaka ny tantarany tao amin'ny bilaoginy ireo mpanoratra malaza maro toa an'i Maroufi, bilaogera monina any Alemaina. Maimaim-poana avokoa izy rehetra ary azo trohana.
Nanontany bilaogera mavitrika roa aho mba hizara ny heviny mikasika ny Blogcity Iraniana tamin'ny taona 2005. Shahram Kholdi, bilaogera monina ao Angletera, nandefa mailaka ho ahy momba ny taona 2005 & bilaogy. Ity ny famintinana ny zavatra tiany nozaraina:
In 2005, the Iranian blogosphere became a public space for political discourse, activism, and collective action on a level completely set apart from the previous years. Several political events became the centrepiece of such activities: the continuing torture and tormenting of Akbar Ganji, the Iranian journalist, the surge in the persecution of student activists and webloggers, the nuclear talks between Iran and the EU, and last but not least, the Iranian Presidential Election.
Even though it still remains to be seen to what extent that Iranian weblogs have a “direct” impact on these events inside Iran, one fact is clear: Iranian weblogs have proven to be a critical tool for collective action and citizen empowerment. Used by people of different social, cultural, religious, and political orientation, Iranian weblogs proved vital to overcome the artificial international borders as a medium of connecting the Iranian youth inside Iran to “Diaspora” Iranian youth more directly. The sense of a more inclusive and world-wide connected Iranian community through the blogosphere was barely undermined by the filtering actions of the Islamic Republic government and their restriction of access to the worldwide web in different ways. However, poverty and the economic digital divide in Iran remain important impediments for many other voices to be heard from within a country whose ethnic, historical, and communal vernacular is much more diverse and is yet to be heard.
Tamin'ny taona 2005, lasa seha-bahoaka resaka politika, fikatrohana sy hetsika iombonana amin'ny ambaratonga hafa tanteraka tamin'ny taona maro lasa ny tontolon'ny bolongana. Maro ireo hetsika ara-politika lasa ivon'ny hetsika tahaka izao: ny fitohizan'ny fampahoriana sy fampijaliana an'i Akbar Ganji, mpanao gazety Iraniana, ny firongatry ny fanenjehana ireo mpianatra mpikatroka sy ny bilaogera, ny fifanakalozan-kevitra nokleary teo amin'i Iran sy ny Vondrona Eoropeana, ary farany fa tsy ny kely indrindra, ny Fifidianana Filoham-pirenena Iraniana.
Na dia mbola hita hatramin'izao aza ny habetsaky ny fiantraikan'ny bilaogy Iraniana mivantana amin'ireo hetsika ao Iran ireo, misy ny zava-misy iray: Hita fa fitaovana goavana ho an'ny hetsika iombonana sy fanomezan-kery ho an'ny olom-pirenena ny bilaogy Iraniana. Ampiasain'ny olona eo amin'ny fironana ara-tsosialy, ara-kolontsaina, ara-pinoana sy ara-politika, hita fa tena zava-dehibe mba handresena ireo sisin-tany iraisam-pirenena artifisialy ho toy ny fitaovana hifandraisan'ireo tanora Iraniana ao Iran amin'ny tanora “am-pielezana” Iraniana mivantana ny bilaogy Iraniana. Zara raha voatohintohin'ny hetsika sivana ataon'ny governemanta Repoblika Islamika sy ny fameperana ny fidirana amin'ny tranonkala manerantany amin'ny fomba samihafa ny fahatsapana ao anaty vondrom-piarahamonina Iraniana miray hina kokoa sy mifandray amin'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny tontolon'ny bilaogy. Na izany aza, mbola mitoetra ho sakana lehibe ho an'ireo feo maro hafa tokony henoina ao anatin'ny firenena iray manana fiteny ara-poko, ara-tantara ary ara-piarahamonina marolafy samihafa sy mbola tsy maintsy henoina ny fahantrana sy ny hantsana nomerika sy ara-toekarena ao Iran .
Azo antoka ny zavatra iray, taona lehibe ho an'ny bilaogy Iraniana ny taona 2005 na dia teo aza ny faneriterena, ny fanivanana sy ny sivana. Maniry taona 2006 mamokatra tsara indrindra ho an'ny bilaogera Iraniana na tsia aho.